ကေမန်ကျွန်းများ LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကေမန်ကျွန်းများ LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဥပဒမကြာသေးမီက "ဒီလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီများဥပဒေ" (LLC) လို့ခေါ်တဲ့ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီများမှဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ရှယ်ယာရှင်များကိုကာကွယ်ရန် 2016 ၏ဇူလိုင်လအတွင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ဤပညတ်တရားကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဝဲရဲ့အလားတူပညတ်တရားနောက်လုပ်ပါတယ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါကေမန် LLC တစ်မိတ်ဖက်များနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဥပဒေရေးရာ entity ကိုတစ်ဦးကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းအကြားတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးမားဆုံးအားသာချက် LLC သည်ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်များအတွက်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ပိုရိတ်ရှယ်ယာအတူကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်မတူဘဲတစ် LLC က၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များစုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ဆင်တူပါသည်။
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများကျူးဘားအနီးကာရစ်ဘီယံပင်လယ်ပေါ်မှာသုံးကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏သုံးကျွန်းများဖြစ်ကြသည်: ရန်းကေမန်, Little ကကေမန်နှင့်ကေမန် Brac ။ ဂရန်းကေမန်ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးမြို့တော်ဂျော့ခ်ျမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအင်္ဂလိပ်က၎င်း၏တရားဝင်ဘာသာစကားသည်အဘယ်မှာရှိ 60,000 ၏ခန့်မှန်းခြေလူဦးရေနှင့်အတူဗြိတိသျှပြည်ပနယ်မြေတွေကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Cayman ချမ်းသာကြွယ်ဝဖောက်သည်သူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ဦးလူကြိုက်များကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ်းလွန်ဘဏ္ဍာရေးစင်တာဖြစ်ခဲ့သည်။
ကေမန်ကျွန်းများလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အကျိုးကျေးဇူးများ
: တစ်ဦးကကေမန် LLC အပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်
• အဘယ်သူမျှမအခွန်ကောက်ခံမှု: အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများင်း၏ပိုင်နက်ပြင်ပရရှိခဲ့ပြီးဝင်ငွေပေါ်ကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်မပေးပါဘူး။ အမြတ်အစွန်းသည်၎င်း၏နယ်စပ်ပြင်ပရှိရရှိခဲ့လျှင်မထားတဲ့ဝင်ငွေအခွန်များပါဘူး။ ဤသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်ရရှိခဲ့သည်ခွဲဝေခြင်းနှင့်အကျိုးစီးပွားများပါဝင်သည်။
• ကွဲပြားခြားနားသောဥပဒေရေးရာဖွဲ့စည်းပုံ: တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ပူးပေါင်း. အကြားတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်ဖြစ်ခြင်း LLC သည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဥပဒေရေးရာဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
• အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်: တစ်ဦး LLC အဘို့အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်လိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: တစ်ဦးကေမန် LLC မှတ်ပုံတင်ရန်, အများပြည်သူလက်လှမ်းမီ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များသို့မဟုတ်မန်နေဂျာများ၏အမည်များပေးမထားဘူးသောမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူတင်သွင်းတစ်ခုသာရိုးရှင်းတဲ့စာရွက်စာတန်းလည်းမရှိ။
• ထိန်းချုပ်ရေး: LLC သည်သဘောတူညီချက် LLC သည်များ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. အဖွဲ့ဝင်များ, မန်နေဂျာများနှင့်ပြင်ပရှိပါတီများရှိနိုင်ပါသည်အာဏာပမာဏကိုသတ်မှတ်ရန်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များကကြီးမြတ်လှတျလပျမှုအများကိုစာဖြင့်ရေးသားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုအဘယ်သူမျှမရိုးမသားသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
• adapter: LLC သည်သဘောတူညီချက်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည့်အဖွဲ့ဝင်များက '' မဲပေးခွင့်နှင့်အတူ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်မှခွဲဝေခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်း & ဆုံးရှုံးမှုများဖြန့်ဖြူး၏ထုံးစံသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
• ရိုးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း: LLC ရဲ့ကေမန်ကျွန်းများမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူရိုးရှင်းတဲ့ကြေညာချက်ဖိုင်များကိုသူကိုဖွင့်တဦးတည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။
• Manager က: ပညတ္တိကျမ်းတဦးတည်းမန်နေဂျာများအတွက်တစ်ခုသို့မဟုတ် LLC ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အဖွဲ့ဝင်အများစုမဲနေဖြင့်ခွင့်ပြုပါတယ်။
• consolidation: ကေမန် LLC ရဲ့နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူပေါင်းစည်းပြီး LLC အဖြစ်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။ အခွားသောကေမန်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်မှတ်ပုံတင်အရာရှိနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံ၏ပုံစံတင်ပို့ရန်နှင့်အတူတစ်ဦး LLC ဖြစ်လာဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။
• အင်္ဂလိပ်: အင်္ဂလိပ် Cayman အတွက်တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။
ကေမန် LLC ရဲ့ဆင်တူသို့မဟုတ်မည်သည့်ကေမန်ဥပဒေရေးရာ entity ရဲ့နာမညျကိုပုံနဲ့တူတဲ့မထူးခြားတဲ့ကုမ္ပဏီအမည်ရွေးရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးကေမန်ကျွန်းများ LLC သည်စကားလုံးများကို "လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ်အတိုကောက် "LLC" သို့မဟုတ် "LLC" ၏တဦးတည်းထည့်သွင်းရန်အဘို့အသာရွေးချယ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး LLC အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင်တည်ရှိသည်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ထို့နောက်သူက၎င်း၏အမည်ကိုအတွက်စကားများ "အထူးစီးပွားရေးဇုန်" သို့မဟုတ်စာလုံး "အထူးစီးပွားရေးဇုန်" တို့ပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦး LLC နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီအမည်ကိုရှိစေခြင်းငှါနေစဉ်, ရောမအက္ခရာကို အသုံးပြု. သာနိုင်ငံခြားဘာသာစကားများကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဒေသခံရုံးလိပ်စာဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်နှင့်အတူတစ်လျှောက် LLC ဘို့လိုအပ်ပါသည်။
LLC ရဲ့အစားရှယ်ယာရှင်များ၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရှိသည်။ LLC သည်သဘောတူညီချက်ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်ရှိစေခြင်းငှါအဘယျသို့အခွင့်ထူးများနှင့်အခွင့်အရေးများကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ဤသည်အကျိုးစီးပွား, မဲပေးအခွင့်အရေး, အကျိုးအမြတ်မခွဲတမ်းထိန်းချုပ်ထားမှုနှငျ့ဆနှင့်ခွဲခြားမှုနှင့် / သို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုရဲ့အဖွဲ့ဝင်အမျိုးအစားများသတ်မှတ်ခဲ့နိုင်ပါသည်။ LLC သည်သဘောတူညီချက်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြင်ဆင်သို့မဟုတ်ပြုပြင်ထားသောနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကကေမန် LLC ဒါရိုက်တာများသို့မဟုတ်အရာရှိများမရှိပါ။ LLC သည်သဘောတူညီချက်က၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များကတစ်ခုသို့မဟုတ်မန်နေဂျာကစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်သည်၎င်း၏မန်နေဂျာ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအားရှင်းလင်းသင့်ပြီးသူသို့မဟုတ်သူမသည်၎င်း၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်အတွင်းရပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့ကန့်သတ် (ရှိပါက) ။
အဲဒီမှာတစ်ဦးကေမန်ကျွန်းများနေထိုင်သူဖြစ်မန်နေဂျာမလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပြီး, ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ မန်နေဂျာအဖြစ်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းခွင့်ပြုထားသည်။
သာ LLC အကြွေးတွေ, liabilities နှင့်စာချုပ်, တရားမျှတမှုမရှိခြင်း, သို့မဟုတ်အကငျြ့မှပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိ LLC သည်၏တာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်ထိုက်ကျင်းပနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ကိုရန်မြင့်တက်ပေးသောအမူအကျင့်အတွက်စေ့စပ်ခဲ့သည်မဟုတ်လျှင်အဖွဲ့ဝင်များသို့မဟုတ်မန်နေဂျာ၏အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောအကြွေးတွေ, liabilities, ဒါမှမဟုတ်တာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခံထိုက်ပေရလိမ့်မည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသို့သော်မန်နေဂျာသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တာဝန်ယူမှုကန့်သတ်ထားလိမ့်မည်:
1 ။ LLC သည်ပိုင်ဆိုင်မှုမှမန်နေဂျာရဲ့သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အလှူငွေ;
2 ။ LLC သည်သဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာသရုပ်ဆောင်သည် ဖြစ်. , နှင့်
3 ။ ထိုကဲ့သို့သောအတိုင်းအတာအထိအဖွဲ့ဝင်ပညတ်တရားအားဖြင့်ဖြစ်စေ, LLC သဘောတူညီချက်တွင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်၏ရပ်စဲအပေါ်သို့ပြန်ရောက်စေမည်အကြောင်းခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက LLC နိမ့်ဆုံးမြို့တော်ကြေညာရန်မရှိပါ။
တစ်ဦးက LLC နျဖိုးထား, အကျိုးအမြတ်, ဝင်ငွေ, ဒါမှမဟုတ်အမြတ်အစွန်းအပေါ်အခွန်ပြုရန်တွန်းအားပေးခြင်းမရှိအနာဂတ်ဥပဒေများကိုသီးခြား LLC သို့မဟုတ်ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်လျှောက်ထားလိမ့်မည်ဟုတစ် 50 တစ်နှစ်အာမခံချက်များအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာလည်းအိမ်ခြံမြေနှင့်အမွေဆက်ခံအခွန်မှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦး LLC ရဲ့အဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်မန်နေဂျာကအမည်မပါသောကေမန်ကျွန်းများမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူတင်သွင်းတစ်ဦးတည်းသာရိုးရှင်းတဲ့ကြေငြာရှိပါသည်။
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများစာအုပ်များနှင့်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအဘို့အတိကျတဲ့နည်းလမ်းများမလိုအပ်ပါဘူး။ LLC ၏အဘယ်သူမျှမမဖြစ်မနေစာရင်းစစ်ရှိပါတယ်။
သို့သော်တစ်ဦး LLC အဖွဲ့ဝင် (ရှိလျှင်) စဲတဲ့အခါမှာတစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အမည်နှင့်လိပ်စာပါရှိသည်သောအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် registry ကို, အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နှင့်ရက်စွဲ၏ရက်စွဲကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ registry ကိုပုကေမန်ကျွန်းစုများတွင်ထိန်းသိမ်းထားခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူးနေစဉ်, registry ကိုထားရှိရာလိပ်စာမှတ်ပုံတင်ရုံးအတွက်ထားရှိမည်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ registry ကိုအများပြည်သူစစ်ဆေးရေးအတွက်ဖွင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး။
ထို့အပြင်တစ်ဦး LLC မေတ္တာရပ်ခံသည်မှန်လျှင်, စစ်ဆေးခြင်းဖို့အစိုးရမှရရှိနိုင်ဖြစ်မန်နေဂျာ, ပေါင်နှင့်ကြွေးမြီ၏စံချိန်တင်ထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူရိုးရှင်းတဲ့ကြေညာချက်ဖိုင်ကိုတနေ့ခြင်းတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရာရှိ LLC သည်မှတ်ပုံတင်ပြီးကြောင်းအထောက်အထားအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတစ်ဦးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရမည်, ဒါပေမယ့်အဖြစ်မကြာမီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တင်သွင်းအတိုင်း, LLC သည်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကြောင့်တစ်ဦးမျှသာမိရိုးဖလာဖြစ်ပါတယ်။
LLC ရဲ့ဒါများသည်ပြိုင်စံရှားသောကြောင့်, အဘယ်သူမျှမကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း LLC ကုမ္ပဏီများမှရရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကကေမန် LLC အပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်: င်း၏ပိုင်နက်ပြင်ပမှာရရှိခဲ့ပြီးဝင်ငွေမအခွန်အခများ, တစ်ဦး LLC သီးခြားဥပဒေရေးရာဖွဲ့စည်းပုံမရှိနိမ့်ဆုံးမြို့တော်, ပြည့်စုံရဲ့ privacy နဲ့ LLC သည်အပေါငျးတို့သကိစ္စရပ်များအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုသည် LC သဘောတူညီချက်များ၏အလိုက်အထိုက်နေတတ်, ရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်ခြင်းမှတ်ပုံတင်ရေးဖြစ်ပါသည် ပြည့်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ် LLC သို့ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်တဦးတည်းမန်နေဂျာလွယ်ကူသောပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းစုစည်းပြီးသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ option ကို, နှင့်အင်္ဂလိပ်မူလတန်း language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။